Djibouti : Ho Toerana Hanehoana Ny Fifanandrian’i Trump sy Shina ve ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2017 14:42 GMT
Ismaël Omar Guelleh (IOG), filohan'i Djibouti, miteny eo amin'ny sehatry ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana (www.news55.se)
Hotsaroan'i Etazonia mandritry ny fotoana ela ny fotoanan'ny tetezamita taorian'ny fifidianana ho filohampirenena. Nolanian'i Donald Trump tamin'ny fandravàna ireo fitsipiky ny politika amerikàna tamin'ny alàlan'ny bitsika tsy hay hoe ahoana sy ireo fihaonana tsy nampoizina ny andro 72 nanasaraka ny fahalaniany ho filoha sy ny fotoana fanosorana azy. Ny 2 Desambra 2016, nataony ho fantatry ny rehetra ny resaka vao avy nifanaovany tamin'ny filohan'i Taïwan, Tsai Ing-wen. Sambany hatramin'ny 1979, taona nanapahan'i Etazonia ny fifandraisana diplaomatika tamin'io nosy kely tsiriritin'ny shinoa mapiray vodirindrina aminy io.
Tamin'ny fandravàna ilay fomba amerikana tranainy efa niainana ela, nalentiky ny filoha vao voafidy ho lalindalina kokoa any fantsy tamin'ny 11 Desambra, fony izy nandrahona tsy nisy olakolaka ny tsy hanaiky intsony ny “Shina tokana” noho ny tsy fisian'ny fandeferan'i Pekin. Hoy ny New York Times, « tsy nisy velively (…) mpitondra amerikana nanozongozona io teboka iray momba ny zavamisy amin'io olana io ». Ao anaty lasibatr'i Donald Trump fatra-piaro ny an'ny tena i Shina, izay ampangainy ho mitratrevatreva ara-toekarena ary rahonany tataonketra 45% ireo vokatra fanondrany.
Shina-Etazonia : mizotra mankany amin'ny fifanandrinana tsy azo ialàna va re?
Ho an'ireo mpanaramaso, ny fironana tsy hay tohaina mankahala ny shinoa ataon'ity filoha amerikana faha-45 ity dia tsy hanao afa-tsy ny hanaratsy ny fihenjanana misy amin'i Washington sy Pekin, fihenjanana mivandravandra be ny fisondrotan'ny heriny tato anatin'ny taona vitsivitsy farany. Resaka ady toerana ara-toekarena sy ara-tafika ao amin'ny ranomasin'i Shina no tena fotony. Isanandro, eo amin'ny 5 lavitrisa taonina eo ireo entana mandalo aminì'io toerana io, toerana iray izay tsy latsaky ny 80% no lazain'i Shina fa azy. Etazonia, etsy andaniny, manentana ireo firenena afaka manamorona io ranomasina io (Thaïlandy, Filipina , Vietnama, Brunei, Malezia) hanome lanja ny zony manoloana an'i Shina fatra-pamolaka amin-kery tsy mitsaha-mitombo isanandro.
Araka izany, sehatra tsy mitsahatra isehoan'ny fanehoana hery ara-tafika ny ao amin'ny ranomasin'i Shina, fihetsiketsehana ifanandrinan'reo sambo amerikana mpitondra fiaramanidina mpiady sy ny sambo shinoa mpisitrika anaty rano. Ny 24 Janoary, nandrahona mivantana an'i Pékin ny mpitondra tenin'ny filoha vaovao : « Raha ao anatin'ny fari-dranomasina iraisampirenena ireny nosy ireny ary tsy tafiditra amin'ny fomba ofisialy ho zara tanin'i Shina, dia hanao izay rehetra azonay atao izahay mba tsy ho firenena tokana no hifehy ireo faritra iraisampirenena». Ary nasian'ny fanamarihana hoe hataon'i Etazonia izay « hiarovany ny tombontsoany ». Tsy lavitra ny fiakaran'ny tosidrà. Ho an'ilay gazety amerikana mpiseho isankerinandro Newsweek, toa « tsy ho azo sorohana» mihitsy aza ny ady eo amin'i Shina sy Etazonia.
Ao Afrika, ady ara-toekarena ifanaovan'i Washington sy Pékin
Tsy ny ranomasin'ìi Shina irery ihany no teboka tsy ifanarahan'ireo firenena roa goavana indrindra ireo. Lasa sehatry ny ady ara-toekarena tanteraka ifanaovan'i Washington sy Pekin koa ny tanibe afrikana. Tamin'ny 2014, raha zara fa nihoatra ny 73 lavitrisa dolara ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'i Etazonia sy Afrika, tafakatra teo amin'ny 222 lavitrisa sahady ny niarahana tamin'i Shina. Tsy hoe fotsiny ny habetsahan'ny fampiasambola eo amin'ny tany roa tonta no hita ho tsy nisy fifandanjàny, fa koa ny endrik'izy ireny dia samihafa tanteraka tamn'ny sehatra rehetra. Raha niompana tamin'ny asa fanorenana fotodrafitrasa goavana ny 70% tamin'ny fanampiana nomen'ny shinoa (lalamby, arabe, tetezana, toeram-pilalaovana, sns…), nankany amin'ny resaka tetikasa momba ny fahasalamàna sy maha-olona kosa ny mitovy lanja amin'io an'ny amerikana .
Na fony izy mbola nipetraka tao amin'ilay trano miendrika atody aza, efa niampanga io mizàna tsindrian'ila io ilay filoha vao avy nitsahatra tamin'ny asany, Barack Obama. Tamin'ny fanipihana ireo ezaka fampiasambola amerikana mba hampiroboroboana ny demaokrasia ao amin'ny tanibe afrikana, nampangain'ingahy filoha ilay Shina tsy nisaiina ary tsy nijery afa-tsy ny tombontsoa ara-toekarena, ilay Shina vonona ny hitrandraka izay rehetra làlana mampiahiahy rehetra any amin'ireo fitondràna afrikana raha toa ka izany no ahafahany miantoka ny hahazoany ireo harena ankibon'ny tany sarobidy fanodina sy mameno ny tany afrikana, ary tena ilain'ny firoborobon'ny indostriany.
Lalao mampididoza no ataon'i Djibouti
Lasa toerana saropady ho an'i Pekin i Afrika ka nahatonga an'i Shina, tsy ela akory izay, nametraka ny toby miaramilany voalohany any ivelany. Hisokatra alohan'ny faran'ny taona 2017 io, izay tsy mbola fantatra na natao hiantohana ny famatsiana ireo sambony ara-barotra, na ho toby famaharana ho anà andiany mpiantoka fandriampahalemana ao Afrika, na efa fiomanana sahady ho amin'ny fipetrahana ara-tafika maharitra ho ataon'ìi Shina ao amin'ilay tanibe.
Na ahoana na ahoana, tsy nandalondalo fotsiny teo ambany mason'ireo efa mpiaradia hatry ny fahagola tamin'ilay firenena kely ao amin'ny tandrok'i Afrika akory ny hetaheta jeopolitikan'i Pekin ao Afrika, firenena kely efa hatramin'ny 1999 no nitondràn'i Ismaïl Omar Guelleh (IOG) azy. Ratsy be ny fijerin'i Etazonia an'io firaisana vodirindrina vaovao an-tery io, izay voatery namela ampahany tamin'ny fitaovana ara-miaramilany tao Djibouti hovantanin'ireo miaramila shinoa ary nampody ireo miaramilany tany amin'ny Toby Lemonnier. Ary io, na dia manana toerana lehibe ara-statejika aza ny tobin'izy ireo ao Djibouti raha resaka asa fitsikilovana no resahana, ary miasa ihany koa ho toy ny toerana fiaingàna sy fipetrahan'ireo ‘drones’ mpankany Afovoany-Atsinanana. Ny fiovàna zotram-piarahamiasa nataon'i OIG, voasarik'ireo fanohanana ara-bola iraisampirenana izay manome ny ampahany betsaka amin'ny haren'ny firenena, dia mampanahy mafy an'i Washington momba ny maha-tena ilàna ny fanohanana olona iray mangeja ny vahoakany ho ao anaty fahantràna lalina, efa ho ny 50% mahery ary mifikitra amin'ny fitondràny amin'ny alàlan'ny famoretana mahery setra.
Marika fa hoe mety hiova ny fitsokan'ny rivotra, i Etazonia, niaina zava-dratsy tamin'ny fahatongavan'i Shina, dia mety efa eo an-dàlam-pieritreretana ny hamindra miandàlana ny andian-miaramilany mitoby ao Djibouti ho any Senegaly. Fialàna izay hidika ihany koa fihenan'ny fanampiana ara-bola ataon'ny amerikana, ary izany dia miaraka amin'ny ho vokatra mavesatra ateraky ny fiankinandoha tafahoatra amin'i Shina mandritry fotoana maharitra hahazo an'i Djibouti. Raha afaka miantehitra amin’ i Pekin i IOG ka hikimpy maso manoloana ny fitantanana tsy araka ny fomba demaokratika ny fireneny, sy ny fanomezana lamosina an'i Washington ary fandraisana an-tanandroa an'i Pekin, dia efa mamatotra sahady ny hoavin'ny fireneny aminà hery iray efa sempotra sy tsy zatra mizara ny tombony azon'ireo orinasany amin'ny mponina eo an-toerana. Ankoatry ny fiantraikany amin'ny olombelona sy ny tontolo iainana izay ny Djibotiana irery ihany no hizaka azy.
Tantaran'ny Djibouti farany
06 Septambra 2018Afrika Mainty